वातावरण स्वच्छ राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो : अभियान्ता टण्डन – Chetananews.com
वातावरण स्वच्छ राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो : अभियान्ता टण्डन
३० असार २०७५, शनिबार २२:३१ 371 पटक हेरिएको
नेपालमा अहिले बातावरण सरसफाइको माहोल बनेको छ । सरकार पनि यसमा सचेत छ । काठमाडौ जस्तो घना बस्ती भयको सहरमा बिगत केही महिना देखि चक्रपथ सरसफाइ अभियान शुरु गरिएको छ । यो अभियान यसै साता देखि ६६औ हप्तामा प्रबेश गरेको छ । काठमाडौको रिङ्गरोड लाई केन्द्रित गरेर शुरु गरियको यो अभियान हाल लोकप्रीय समेत बन्दै गइरहेको छ । उत्साहजनक तबरले अघि बढिरहेको यो अभियानमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय सहित सर्वसाधारणको पनि बढ्दो सहभागिता छ । यस अभियानका मुख्य अभियान्ता हुनुहुन्छ सरसफाइ अभियान्ता लोकबहादुर टण्डन । टण्डन गुल्मी जिल्लाका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ ।
बिक्रम सम्वत २०५० सालमा गुल्मीबाट बुटवल आइपुग्नु भएका टण्डन करिब १२ बर्स बुटवलमा व्यबसाय पश्चात् राजधानी काठमाडौ पुग्नुभो र अहिले व्यवसाय तथा सामाजिक काममा सकृय हुनुहुन्छ । उहाँ काठमाडौको ग्रीनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । टण्डनले काठमाडौको चक्रपथ सरसफाइ अभियान मात्र हैन बुटवलमा समेत तिनाउ सरसफाइ अभियान शुरु गर्नु भएको छ । गत जेठ ३० गते बाट शुरु भयको यो अभियानले यहि असार ३० गते चौथोपटक बुटवलमा सरसफाइ७लदकउस गरेको छ । चौथोपटकको सरसफाइ अन्तरगत बुटवल बसपार्क र आसपासको सरसफाइ गरियको छ ।उक्त सरसफाइमा सहभागी हुन बुटवल आइपुगेका सरसफाइ अभियान्ता लोकबहादुर टण्डन सङ्ग सरसफाइ अभियानका सम्बन्धमा हामीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः – टण्डन जि सरसफाइ अभियान मा लाग्नु भएको छ कस्तो चलिरहेको छ अभियान ?
विभिन्न निकाय र आमजनताको सहकार्यमा हामी काठमाडौको चक्रपथ सरसफाइमा बिगत केही महिना देखि लागिरहेका छौ र सरसफाइ उत्साहजनक तबरले अघि बढ्दै छ । काठमाडौ चक्रपथ सरसफाइ ६६ औ हप्तामा प्रबेश गरेको छ यो सबैका लागि खुशिको कुरा हो । काठमाडौ सङ्गै तिनाउ सरसफाइ अभियान बुटवलमा पनि भर्खर शुरु भएको छ,यो पनि राम्रै तबरले अगाडि बढिरहेको छ ।
हामी प्रत्येकले आ आफ्नो ठाउँबाट देशको लागि सानो सानो काम गर्यौ भने पनि त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउछ ।
काठमाडौमा सरसफाइ अभियान चलाइरहेको मान्छे किन बुटवलमा आउनु भो ?
देशका विभिन्न ठाउमा सरसफाइ अभियान चलेका छन । तर बुटवलमा मैले त्यस्तो अभियान देखिन । बुटवल मेरो पहिलाको कर्मथलो हो । यहाँ मेरा आफन्त, साथीभाइ थुप्रै हुनुहुन्छ । आफ्नै ठाउँ भयको कारणले बुटवल सरसफाइमा म सम्लग्न भयको हु ।
सरसफाइको अभियानमा अन्य निकायको साथ कत्तिको पाउनु भयको छ ?
म लगायतको टिमलाइ सरसफाइको अभियानमा विभिन्न निकाय बाट एकदमै साथ र सहयोग मिलेको छ । पानी पर्दा, जाडो हुदा, गर्मी हुदा समेत सरसफाइमा धेरै जना जुट्नुभयको छ । घाम, पानी, जाडो, हिलो, धुलो, मैलो नभनी हामी सरसफाइ अभियानमा लागेका छौ । सरकारी निकाय बाट पनि राम्रो सहयोग प्राप्त छ । विभिन्न सङ्घ सस्थाले पनि साथ दिनुभयको छ । सर्वसाधारणको पनि सहभागिता उत्तिकै छ । हामिलाइ हौसला मिलिरहेको छ । सबैको सहयोगले अघि बढेका छौ । सामाजिक काममा बडो जोशले लागिरहनु भएको छ यस्तो प्रेरणा कहाबाट मिल्यो तपाइलाइ ?
पहिला गाउँमा मेरो बुवा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । बुवा गाउमा बाटो बनाउने, पौवा बनाउने, पधेरो निर्माण गर्ने जस्ता काममा हिड्नुहुन्थ्यो । मैले सानैमा त्यो काम प्रत्यक्ष देखेको थिए । त्यही कारणले मलाइ सामाजिक काममा प्रेरणा प्राप्त भयो ।
अहिले त मानिसहरुमा कुनै राजनीतिक दलमा लागेर सामाजिक काम गर्ने चलन छ तपाईं किन दलको राजनीतिमा लाग्नु भएन ?
दलिय राजनीति भन्दा बाहिरबाट पनि समाजसेवा गर्न सकिन्छ ।
दलको राजनीतिमा मेरो पनि आस्था छ, तर दलिय राजनीतिमा म सक्रिय छैन । दलिय राजनीति भन्दा बाहिरबाट पनि समाजसेवा गर्न सकिन्छ भन्ने मलाइ विश्वास छ । हामी प्रत्येकले आ आफ्नो ठाउँ बाट देशको लागि सानो-सानो काम गर्यौ भने पनि त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउछ । वातावरणलाई स्वच्छ राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । बुटवलको सरसफाइको नेतृत्व पनि तपाईं आफैले गर्नु भयको छ, यताको नेतृत्व स्थानीयलाई दिए हुदैन ?
बुटवलमै बस्नेले यहाको नेतृत्व लिदा धेरै राम्रो हुन्छ । जोश र जागर भयको ब्यक्ती भयमा म सहयोग गर्न तयार छु । हामी सबै मिलेर बुटवल लाई स्वच्छ बनाउनु पर्छ ।
टण्डन जि अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
तपाइको यो मिडियामा मेरा केही कुरा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा तपाइहरुको सम्पुर्ण टिमलाइ धन्यबाद । सबै आमजनतामा मेरो के अनुरोध छ भने घरबाट दैनिक निस्कने फोहोरलाई सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा नफालौ ।
वातावरण सरसफाइ गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाएर पुन प्रयोग गरौ । फोहोरको पुन प्रयोग गरि फाइदा उठाउन सकिन्छ । तपाईं हाम्रो छरछिमेक, टोल, समाज, बाताबरण सफा भएमा हामी पनि निरोगी बन्छौ । त्यसैले सरसफाइमा ध्यान दिनु जरुरी छ । र अन्त्यमा काठमाडौ चक्रपथ सरसफाइ र तिनाउ सरसफाइ अभियानमा साथ दिनुहुने सम्पुर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, स्थानीय बासिन्दा, सामाजिक अभियान्ता सञ्चारकर्मी लगायत सम्पुर्णमा आभार प्रकट गर्दछु । आगामी दिनमा समेत सहकार्यका निम्ति अनुरोध गर्दछु । हामी सबै मिलेर नेपाललाइ स्वच्छ बनाऔं यहि मेरो चाहना छ ।
नागरिक स्वतन्त्रतता नै हाम्रो
प्रधानमन्त्रीको योभन्दा ठूलो ढोंग